Tsara indrindra ny Tanàna any Shina mandritra ny Fivoriana ny Vehivavy Tokan-tena
Amin’ny Shina ho ny goavana firenena izany, dia naniry ny hevi-dehibe vitsivitsy praiminisitra toerana ho an’ny fivoriana tsara tarehy, manam-paharoa, ary ny iray vehivavy Shinoa ao Shanghai, fa koa ao amin’ny am-polony maro hafa praiminisitra sy matetika tsy fantatra harena toerana loatra. Raha misy be dia be ny vahiny, tsy mampino ny vehivavy Shinoa ao Shanghai, ary ho lehibe ny fiarahana na ny tambajotra fahafahana, zava-dehibe ny mahatsiaro fa na ny heverina ho ‘mpizaha tany hub’. Raha izany dia mety ho tsara ho an’ny sasany, indrindra afaka manantena ambony be ny vidin-javatra eto fotsiny momba ny zava-drehetra vidim-piainana mifandraika sy ny vehivavy mazàna no tena lafo vidy tsirony ihany koa. Ny iray mety milaza fa Shanghai dia lasa maka ny fomba tandrefana, noho izany raha tsy lehibe noho ny voalohany timers, feno teny ny sekoly, sy ny namana vaovao na ny mamantatra ny nightlife izany dia mety tsy ho tena tsara toerana noho ny fitadiavana ny voalohany Shinoa ny fitiavana na ny tokan-tena ny vehivavy. Hangzhou any amin’ny Andrefan’ny Farihy (sy ny Lehibe Lakandrano), ary koa ny Lijiang hita ao Atsimo andrefan’i Shina ao Yunnan, faritanin’i dia fantatra ho roa ny tena tantaram-pitiavana toerana mba hahita ny fitiavana sy ny tokana ny vehivavy Shinoa. Raha toa ianao ka ho kokoa fahiny mahatsapa, traikefa, sy ny kolontsaina dia Lijiang mety ho tonga lafatra ho anareo. Miaraka amin’ny tsy mampino hizaha sady tsara tarehy biriky lalana manerana ny tanàna io no tena toerana iray ianao dia tsy manantena ny mba hahitana ao ny Sinoa olon-tiany sarimihetsika. Ity tanàna ity dia tanteraka noho ny toeram-pivarotana kely, ary efa tsy misy farany be tendrombohitra terrains ny traikefa nahafinaritra, ary koa ny sightsee. Maro ny Shinoa tia hetsika ity toerana tsara tarehy mba hanomboka ny fianakaviana ary aza sasatra, ka mahita olon-droa miara-eo amin’io toerana io dia ho iraisana fironana. Tokony manana liana amin’ny Sinoa fahiny finoana sy ny hevi-diso mety hihevitra ny miaina ny tantaram-pitiavana an-tanàna ny Hangzhou. Ity tanàna ity dia azo antoka fa manana ny tsara tarehy indrindra amin’ny vehivavy ao amin’ny firenena iray manontolo ao Shina. Maro tsara tarehy, tokana vehivavy Shinoa dia hita matetika mandeha manodidina, philosophizing, ary manonofy ny iray andro marina-ny fitiavana ny manodidina ny Farihy Andrefana. I Hong Kong na dia mety ho toa tena be tamin’ny voalohany, ary mampatahotra ny voalohany timers, tena manana be dia be ny tolotra vahiny mpizaha tany sy ny olona mitady ny tena Shinoa ny fitiavana.
Farany, ao amin’ny tanàn-dehibe toy izany, dia tena miankina aminao, ny toetra, ary aiza na ahoana ianao vonona mba hitady tokana vehivavy Shinoa. Avy amin’ny fikambanana mba fiteny ny sekoly, ny toeram-pivarotana eny amin’ny magazay lehibe dia tanteraka miankina aminao. Maro ny Shinoa ny vehivavy efa lehibe mahaliana ny amin’ny vahiny ny olona ary mitady ny fitiavana avy amin’ny karazana samy hafa ny olona ivelan’ny inona ny nitondra ny manodidina. Noho izany, ny kokoa azo ampiharina mba haka iray Shinoa zazavavy tao amin’ny fivarotana lehibe, fivarotana kafe, na fotsiny nitsangantsangana eny an-dalambe eny. Tsarovy fotsiny, ho mahalala fomba ny, fanao, ary mahalala ny Sinoa kely raha azo atao, sy ho tena izy eo amin’ny teny sy ny faniriany. Izany matetika no nilaza fa ireo karazana vehivavy iray ny lehilahy iray manintona milaza fa mahatsiravina be ny momba ny olona ny tenany. Raha toa ka ianao ho fahazavana hoditra, matetika avo, ary feno fahasahiana iray vehivavy Shinoa avy eo Dalian mety ho tonga lafatra ny fiaingana noho ianao. Ity faritra avaratra atsinanan’i Shina dia fantatra noho ny tsara cultured vehivavy Shinoa izay tena mpieboebo, sahisahy, sahy, ary na dia tsy miankina.
Ireo toetra ireo dia manan-danja ho an’ireo izay mitady ny tsy ‘volamena-mpitrongy tany’
Na dia nilaza aza ireo vehivavy efa lehibe ny tsirony amin’ny sakafo sy ny fashion, maro dia tena ampy traikefa nahafinaritra mpitady. Dia anao ny karazana saro-kenatra, na angamba ny karazana lehilahy izay mitady saro-kenatra Shinoa iray ny vehivavy? Avy eo dia Suzhou mety ho tonga lafatra voalohany mpizaha tany toerana halehany ho anao. Maro ny milaza fa misy ny tena teny, tsara tarehy, mamy, sy ny tena fitiavana ny vehivavy no niteraka ireto ao Suzhou. Ireo Shinoa ny vehivavy no malaza ho tena mahatoky, ny fikarakarana, sy feno fangorahana tia fa dia foana tsy hiala avy ny lafiny, hampahafantatra anao ho namana vaovao, ny fianakaviany, sy ny vaovao niainany. Tokony efa mba tsara vintana fa tafintohina ny vaovao tokan-tena Shinoa tia, Sonya mety ho tonga lafatra ny toerana mba handray ny tia amin’ny traikefa nahafinaritra vaovao.
Sonya no tsy azo isalasalana fa ny tora-pasika tsara indrindra ao Shina sy ny tsara indrindra ny andro tontolom
Ankoatra izany, na raha toa ianao ka tsy efa hita ny iray vehivavy Sinoa na izany aza, misy be dia be ny iray vehivavy Shinoa any Sonya izay mitady namana vaovao, ary mety hihaona ny voalohany sy ny farany ‘ny iray tena tia’. Raha misy ny tsy manam-pahataperana faritra, faritany sy ny tanàna ao Shina misafidy avy amin’ny fitadiavana ny tsara tarehy, ny tokan-tena vehivavy Sinoa, izany dia tokony hatao foana ny miezaka avy ny tsirairay-toerana nandritra ny andro vitsivitsy, raha azo atao, miezaka ny vintana sy ny bebe kokoa acclimating ny tenanao ho amin’ny isan-karazany momba ny kolontsain’ny ny vehivavy Shinoa isaky ny faritra, sy izay tsy maintsy atolotra ny toetra sy ny olon-tiany hendry
← Ny zavatra tokony Hatao Rehefa Mampiaraka ny Vehivavy Sinoa, Dia Nihaona an-Tserasera